baydhabo | News From Somalia
Tag Archives: baydhabo
BAYDHABO:-Ganacsatada Baydhabo oo lagu Qasbay inay Bixiyaan Lacago Baad ah.
Posted on May 14, 2013 by Voice Of Somalia Standard
Saraakiil katirsan Xabashida iyo Maleeshiyaadka Somalida aah ayaa ku amar ku bixiyay in ganacsatada ku sugan magaalada Baydhabo inay bixiyaan lacago baad ah si loogu Maalgaliyo ciidmada Afrikaanta ah ee ku sugan qaybo kamdi ah gobolka Bay.
Lacagaha la dul dhigay Ganacsatada in si qasab ah ku bixiyaan ayaa gaaraya qiima lacageed oo dhan 200,000 laba baqol oo kun doolarka Mareykanka ah.
Saraakiisha katirsan DF-ka ah ee ku sugnaa goobta ganacsatada lagu qasbay in lacagahaasu sida ugu dhaqsiyaha badan ugu bixiyaan ayaa Waxaa kamid ahaa Gudoomiyaha Gobolka Bay iyo xubno kale oo Xabashada xooga ku jooga Gobolka Bay.
Ganacsatada oo ahaa kuwo si qasab ah la’isugu so aruuriyay ayaa arinkaasi u cuntami weysay isla mar ahantaana ay sheegeen Inaysan ka bixi Karin lacagaha lagu qasbay balse loogu hanjabay in hadii ay bixin waayaan laga qadi doono talaabo adag.
Gobolka bay ayaa waxaa jira dhibaato balaaran oo ay ku hayaan Maleeshiyaadka is haysta oo Xbashido ku hayso gobolka oo dhan, waxaana maalin kasta is haysta iyaga dhexdooda.
Ciidamadii Itoobiya oo isaga baxay Degmada Ufuroow ee gobalka Bay oo ay isku dayeen inay qabsadaan.
Warar la helay ayaa ku waramaya Ciidamadii Itoobiya maanta qabsaday Degmada Ufuroow inay isaga baxeen degmada kuwaasi oo qabtay wadadii ay ku yimaadeen.
Boqolaal ciidamada Shabaabka ayaa ayaa gudaha u galay magaalada, dagaal dheer oo saacado qaatay ciidankii soo duulay wexey dantu ku kaliftay in magaalda ay isaga baxaan.
Ciidamada ayaa maanta dagaal xoogan uu ku qabsaday Duleedka Degmada Ufuroow ee Gobalka Bay iyadoo ay jiraan qasaaro xoogan oo soo gaaray Ciidamada huwanta gudaha ugalay Degmada Ufuroow.
Xaalada Ufuroow ayaa maanta kacsanayd wacaana ciidamada duulaanka kusoo qaaday degmada ay goobta ka gaysteen dhac iyo handadaad.
Duulaanada ceenkani oo kale ah ayaa kusoo batay degmada mana ahan markii ugu horreysay oo ay soo gaaraan degmada tan iyo wixii ka dambeeyay markii ay soo galeen qeybo kamida gobolka.
Xabashida ayaa shalay xasuuq ka gaystay magaalada ay xooga ku haystaan Baladweyne waxayna ku xasuuqeen dad rayid ah oo aan waxba galabsan.
Waxaa dhiigbax ku socdaa gaaladii soo duushay walba ay oo ka joogaan gayiga Somaliyeed.
GEERI:-Xasan Maxamed Nuur “Shaati Guduud” oo Jarmalka ku geeriyooday.
Xasan Maxamed Nuur Shaati Guduud ayaa muddo sanado ah waxa uu la daalaa dhacayay xanuunka dhiig karka iyo kaadi macaanka, waxaana sida ay xaqiijiyeen qaar ka tirsan eheladiisa uu ku geeiryooday Isbitaalkii lagu baxnaaninayay oo dalka jarmalka ku yaal.
Shaati Guduud oo ka mid ahaa dagaal oogayaashii gobollada Baay iyo Bakool ayaa waxa uu xilal kala duwan kasoo qabtay Dowladdii Carta ee ee Madaxweynaha uu ka ahaa C/qaasim Salaad Xasan iyo Dowladdii C/llaahi Yuuusuf Axmed.
Cunto Nafaqeysan iyo Dawooyin Lacag La’aan ah oo la gaarsiiyay Shacabka Magaalada Xudur.
Posted on March 30, 2013 by Voice Of Somalia Aside
Wararka ka imaanaya Xudur ayaa sheegaya in gaadiid waday dawooyin iyo raashin nafaqeysan uu maanta gaaray magaalada Xudur,boqolaal qoys ayaa lafilayaa in ay ka faa’iideystaan gargaarka caafimaad ee mujaahidiinta Soomaaliya ay magaalada gaarsiiyeen.
Saraakiil katirsan maktabka caafimaadka wilaayada Bay iyo Bakool ayaa warbaahinta u sheegay in dhaqaatiirta ay dawooyin iyo baaritaanno lacag la’aan ah ufidiyeen shacabka.
Mas’uuliyiin katirsan maamulka islaamiga degmada Xudur oo iyana warbaahinta lahadlay ayaa sheegay in dawooyinka dadka si siman loogu qeybin doono.
Saraakiisha Maktabka caafimaadka Wilaayada Bay iyo Bakool waxay sheegeen in Buskut nafaqeysan ay uqeybiyeen carrur iyo haween nafaqa darro ka sheeganayay,ciidankii Xabashida Itoobiya ee mudada sanadka ah gumeysiga ku joogay ayaa kadeed dhan walba ah ku hayay shacabka muslimiinta magaaladaasi.
DHAGEYSO:-Ciidanka Itoobiya oo baxaya, Saraakiisha Itoobiya iyo Uganda oo indhaha farah iska galiyey iyo ceebta Xassan Gurguurte haysata.
Itoobiyaanku waxay shir la qaateen Saraakiil Uganda iyo saraakiisha maleeshiyo Beleedka Baydhabo jooga ,waxay dheheen waan baxaynaa, waxaa la sheegay in Saraakiisha Uganda ay aad oga caroodeen bixitaanka Ciidanka Itoobiya kadibna ay Faraha Indhaha iska galiyeen.
Itoobiyaanku waxay si cad u sheegeen in aysan wax Lacag ah ka helin Reer Galbeedka, marka Itoobiya waxay rabtay in ay baxar galiso ciidamada Uganda iyo Burundi ee laga soo saari waayey Magaalada Muqdisho, hadda waxaa la keenay Magaalooyin ay aad u sahlan tahay in lagu xasuuqo ciidamada shisheeye.
Waxaa hubaal ah Ciidanka Kenya, Uganda iyo Burundi in barqadii Mujaahidiintu cayrsanayaan. Dhinaca kale Xassan Gurguurte oo aanan ka hadlin bixitaanka Ciidanka Itoobiya ayaa waxaa ka hadlay Xoghayaha Maraykanka u qaabilsan Wadamo Afrika kamid ah Johnnie Carson, waxaa si wanaagsan oga hadlay Saxafi C/fitaax Maxamed Qaasim oo sharaxaad dheer ka bixiyey bixitaanka Ciidanka Itoobiya iyo Warbaahinta Caalamku waxay ka qortay.
Isha Maqalka Idaacadda Islaamigaa ee Alfurqaan.
DHULKU MA GUURO:- Ciidanka Itoobiya oo faarujiyay Degmada Ceel-Barde iyo Maleeshiyaadkii oo kala fakanaya hubkooduna iibyahay.
Posted on March 21, 2013 by Voice Of Somalia Aside
Ciidamadii Itoobiya ee dhawaan isaga baxay magaalada Xudur ee gobolka Bakool ayaa ugu dbay gudaha Ethiopia arrinkaasi oo ka dhigan in Itoobiyaanku si buuxda uga bexeen Bakool.
Ciidamada Itoobiyaanka ay ka guuray saldhigyo ay ku lahaayeen gudaha iyo daafaha magaalada,in kabadan 56 gaadiidka dagaalka ah iyo kuwa xamuulka oo ay ciidanka Itoobiya wateen ayaa gudaha u galay dhulka Soomaalida ee lagumeysto.
Maleeshiyaadkii Soomaalida ahaa oo muddo sanad ah halkaasi ku sugnaa ayaa kala fakanaya cararaya hubkooduna iib u yahay,waxayna u fakanayaan meelihii markii hore laga keenay,waxayna jid mar ka sii dhigaynayaan hubkii ay haysteen,taaso caado u ah.
Ceelbarde oo 95 KM Xudur dhanka waqooyi kaga beegan Xudur 22-ka sano oo ay Soomaaliya dowlad la’aanta tahay waxay ku jirtaa gacan gumeysi waxayna naqatay marin ay ciidanka Itoobiya u maraan dhanka Xudur iyo Bakool inteeda kale.
GABAY:-Gabay ku saabsan Xorreyntii Xudur (W/T Cabdullaahi Soomaali)
Mahad oo Idil Allaah ayay u sugnaatay, Nabad gelyo iyo Naxariis Nabi Muxamed korkiis ha ahaato.
Sidahaddii qofka Aadmiga ah Xubin jirkiisa ka mid ahi Xanuunto jirka intiisa kale ula xanuunsado ayay Markii qolo Muslimiinta ka tirsan dhibaato gaarto kuwa kale ula xanuunsadaan ulana qeybsadaan Murugada iyo Uur ku taalada gaarta.
Maalinta Muslimiintu farxaan oo ay dhacaan guulo ay waqti naawilayeen kuwa kale wey la qeybsadaan oo sidooda oo kale ayay u farxaan.
Ciddii farxadda Muslimiinta ka naxda dhibaatada Muslimiintana ku raaxeysata ha isweydiiso qolada ay ka tirsan tahay.
17 03 2013 ee Taariikda Milaadiga waa Maalintii Magaalada Xudur ee Xarunta Gobalka Bakool ay ka baxeen askarta Itoobiya oo Muddo Sanad ah joogay dhibaatooyinna ku hayay Muslimiinta walaalaheeen ah ee halkaas ku dhaqan.
Xorriyadi Baryo kuma timaado ee Dagaal dheer, dhimasho iyo dhaawac badan, isu gudbinta saadka oo ku adkaaday iyo dhibaatooyin kale oo soo wajahay ayaa sabab u noqday in askarta Itoobiya naftooda kala cararaan Xudur.
Gudcur iyo koley tahay dharaar gaabis laga roone,
Guluf iyo waxaa lagu helaa Geeri iyo dhiige,
gacmohoo la laabtaan Xorriyad Cidi ku gaareyne,
erayadaas waxa ay ka mid ahaayeen Maansadeydii Gowrac dhega dhaafa ah ee aan tiriyay dhamaadkii Sanadkii tegay waxaanay na tusayaan in aan Nin gaabiyaa Gobanimo soo dhicineyn.
Mujaahidiinta ayaa Muddo dheer Xabad ku waday Cadawga Xudur qabsaday dadkeeduna Allaha ka abaalmariyee intii tabartood ah waa dadaaleen.
Gabaygaan oo la yiraahdo Xudur waxaan ugu tala galay in jiilka Maanta iyo kuwa naga dambeeyaba ku xasuustaan wixii Xudur ka dhacay.
Sidoo kale Maansadu waxa ay ka hadleysaa in dhulkeenna Cadawgu in badan oo ka mid ah haysto qorshayaal in uu qeybsado ahna uu horay u degsaday gaar ahaanna Kenya iyo Itoobiya Muhiimadduna ay tahay in aan iska dhicino.
Mansadu waxa ay ku bilaabanaysaa
Xaasidnimo kuwii looga yaqiin xumaan iyo hoogga,
Xabashiyo Tigreegi na dhibay iyo xigaalkoodi,
Xabbadaha markii lala dhacee xinjir laga dhoobay,
Xabaaluhu markii ay bateen lagu xareynaayo,
Xagaa iyo xaggaa kale markii lagaga soo xoomay,
Xaniinyaha Markii ay qabteen niman xaq doonaaya,
Xulalkii Islaamkaa heloo wey Xaskuliyeene,
Weerarada xad dhaafkiyo kolkii xaqiiqadu gaartay,
Xulufada Saliibigu jabtoo xamaamadi qaate,
Xudur waa ka guuroo kufrigi Xalay ka guureeye,
Kuwi Gaalka Xiisuhuu qabaa Xanuunsanayaane,
Xididdu dhaqaaqo wadnuhu dhab u xawaareeye,
Xangulaha iyo Neerfahu xiimoo ololeene
Xubnahaa jareeyoo hurdadi kala xaluusheene,
Xiqdigii ka buuxiyo qubxigi xumad ka qaadeene,
annagana Xogteena ayaan idiin xaqiijaaye
xaggaya Farxadbaa jirtoo Xabadka noo taale,
Towxiidka Calan lagu xardhaa xariga loo taagee,
Xaggaaygaa babaayoo luloo Cadaw xajiimooye,
Xijaabka Hablahow ka dhigay xiran dharaartaane,
Dugsiyadii xagoodii la aad uu xanibay waaye,
Xoorta iyo Dhaydiisiyo Jihaadka Xooxdiise,
Xigtiisa annagaa dhannoo Xorriyad joognaaye,
Xagsooraha na kaabaye annagu xoog malihin weyne,
asigaa Xisaabtiyo na baray Xeeeladiyo Diinta,
Guushow noo ximbaariyay ayaan ku xamdineynaaye.
Xalqo kale ayaa mudan in aan galno xisaabteede.
Nin Hashiisi Xiis laga dhacoo aan Xaglaha nuuxin,
iyadoo Xagar daaqdiyo Xayay Caleemeystay,
oo Candhudu sidii xaarin tahay Xaadda lagu dheehay,
Xag inuu ka maaloo dhakal Xilif ka soo siiyo,
Xidigahay ka dheertahay inuu xidid ku sooraaye,
Xiligii gumeystaha dhulkii xoogga laga qaatay,
Xabashidu intey boobtayoo u xaniban waaga,
Xukuumadda Kenya midkey gelisay xeyndaabka,
asigoo xagoodii jiroon laga xoreyn waaga
Ninki xananka jiiraa dhir kale xeel u helayaaye,
Xaarwalwaal ugandheys iyo Xamaaligisiiba,
Xuub madoobe reer Burundiyoo na xag xaganaaya
Iyagoo xukaam kale watoo weliba soo xoojay,
Xamar iyo Kismaayiyo ,Balcad, xaafadaha Jowhar,
Beledweynihii Xilli ahaa Xarun daraawiishti,
Xayo iyo Badhaadhe iyo dhulal ku sii xeeran,
Xamlo iyo dagaal adag.